Muxuu keenayaa PlexEarth 2.0 - Geofumadas
Abriil, 2010 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps
Bishii Nofembar ee sannadkii hore Waxaan sameeyay qiimeyn ee version 1 ee PlexEarth Tools for AutoCAD, oo ka mid ah hal-abuurnimadeeda waxaa ka mid ah isdhexgalka AutoCAD iyo Google Earth. Mawduucan waxaa kujira horumar sida Maqaarka, Kmler, Xisaabinta, kml2kml, kiiska Plex, fekerkeyga, mid ka mid ah horumarka ugu wanaagsan ee aan ku arkay labadaba, ma ahan in lumiyo farsamada ee ka faa'iideysanaya sifooyinka gaarka ah ee AutoCAD iyo buuxinta khariidadaha GoogleEarth leedahay.
Waxaan hadda helay imtixaanka beta ee nooca 2.0, oo dhowaan soo bixi doona. Bilowgii, waxay umuuqataa horumar aad uxiiso badan, waa kuwan aragtidayda koowaad.
Ku saabsan waxa AutoCAD
Noocani wuxuu imanayaa AutoCAD 2010, oo diyaar u ah inuu ku ordo AutoCAD 2011 in uu ahaa waqti waxaa ka mid ah daahfurnaanta. Way cadahay, in ay ku shaqeyso Civil3D ama codsi kale oo ka yimid nooca 2010, ma hubo in 2009 iyo xaqiiqdii, aysan ku shaqeyneyn nooc kale oo hore sida dhaxalkiisu u sameeyay.
Horumarka, mar la rakibay, si toos ah ayaa loo dhaqaajiyaa sida tabo cusub qoofalan, iyada oo faa'iidooyinka muuqda ee buuggan, kaas oo kuu ogolaanaya in aad u jeediso albaabbada ama banaanka si haboon.
Taas waxaa ku jira nuqulka
Naqshadeynta naqshadeynta waxaa la sameeyey "Cadowga", soocay hoos macquulka ah oo aad wax ku ool ah, sida in version this waxaan tijaabiyey oo aan qoraal buuga ama sii daayo iyo ku dhawaad ​​by dareen badan intii la filayay si loo horumariyo, waxaan u imid in ay fahmaan in ay u adeegaan badhannada.
Nidaamka isuduwidda Halkan, iyada oo aan wax badan soo noqon, waxay u oggolaaneysaa in ay doortaan dalka iyo UTM.
Sawirro. Waa kuwan xulashooyinka lagu abuuri karo sawir muuqaal ah, sidoo kale waxaa laga soo saari karaa geesoolayaal hore u jiray, oo lagu sawiray duulimaadka, iyadoo loo marayo waddo, abuuritaanka mosaiciga sida ku cad habka loo dejiyay.
Muuqaal. Waa kuwan shaqooyinka loogu talagalay diiradda iyo iswaafajinta, ha ka ahaato Google Earth oo ku saleysan dejinta AutoCAD ama gadaal. Tan waxay ku leedahay wax la mid ah waxa ay qabato Microstation laakiin midkastaa wuu gaaban yahay.
Abuuri. Tani waa mid cusub oo aad loo cusbooneysiiyay wixii ay sameyn jirtay. Waad abuuri kartaa dhibco, jidad, polygons, oo leh dhammaan sharciga AutoCAD oo si otomaatig ah ayaa loogu cusbooneysiin doonaa kml. Xitaa waxay leedahay ikhtiyaar ah soo saarista qaababka dhibcaha ee ku saleysan astaamaha AutoCAD, Google Earth iyo xitaa wadada html.
Asal ahaan asalkani waa inuu ku sawiraa Google Earth, iyada oo saxda ah ee AutoCAD. Wanaagsan dhamaadka qaliinka waxba lagama hirgelin dwg, kaliya ee Google Earth, oo lagu daro qanacsanaanta in ay ka qabatay AutoCAD.
Tirinta. Kani waa soojiid, wuxuu u oggol yahay in lagu sawiro Google Earth, dhibco, polylines iyo 3D polylines oo lagu keydin doono dwg. Loo dhan yahay Taageerada qashinka! on Google Earth, iyo waxa la soo saaro waxaa lagu abuuray dwg.
Maaskadan digitation-ka ah waa mid aad u xiiso badan, markaad bilowdo amarka waxay qaboojineysaa zoomka labada barnaamij si loo hubiyo joogteynta. Badhanka midig ayaa kuu oggolaanaya inaad ku kala bedesho howlaha ama nasashada oo hubaal kaa madax bannaysay madax xanuun dartiis khiyaanada ay asxaabtaan u cabbeen.
Asal ahaan, waa bedelka Abuuritaanka, waa in lagu sawiraa dwg, adoo riixaya Google Earth. Dhamaadka, shayga ayaa kaliya lagu sawiraa dwg, wax ku saabsan Google Earth.
Ku dhoofinta Google Earth. Halkan waxaad u diri kartaa walxaha kml, sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad dirto sawirada. Tan dambe waa weyn tahay, in la dhoofiyo sawirrada juqraafiyeed ee AutoCAD; qalab yar (aad u yar) ayaa tan sameeya.
Dhulka iyo Dhulka. Halkan waxay ku cabi jireen cagaar, maaddaama ay ku darsadeen shaqooyin si ay u abuuraan moodel dhul dijitaal ah, dusha iyo dusha khariidadda oo aan ka ahayn xogta Google Earth.
Waxaad ka soo dhoofi kartaa Google Earth, oo soo saari doonta shabakad, laakiin sidoo kale waxay taageertaa moodooyinka dhulalka ay sameeyeen barnaamijyada kale (sida 3D), Waxyaabaha of CAD (dhibcood, polylines 3D, breaklines, mesh polyface, xuduudaha dibadda / gudaha, iwm), taas oo ku siinayaa AutoCAD awood u fudud in keliya baa la samayn karaa Land ama Civil sameeyey.
Waxaad xisaabin kartaa xaddiga u dhexeeya dusha sare, waxaad abuuri kartaa dhibcooyin farsamo qoraalka, calaamadeynta calaamadaha ... waa inaad aragto! maxaa yeelay wuxuu hubaa inuu leeyahay wax badan.
adeegyada. Halkan waa inaad ku habeysaa xuduudaha guud, sida wadada ay sawirada ku kaydsan yihiin, Google streamout timeout, liisanka firfircoonaanta, iwm.
Goorma iyo intee in le'eg
hadda waxaan tijaabinayaa nooca beta, in kasta oo ra'yigeyga ay diyaar u tahay in la isticmaalo. Waxay leedahay astaamo badan oo caqli badan oo horey loogu dhisay, sida:
Marka sawirka la qabsado, haddii dhulku uu firfircoon yahay, waxay si toos ah u joojinaysaa farriinta aqbalaadda / diidmada.
Dhinaca kale, haddii aad rabto in aad soo dejiso qaab dijital ah Google Earth, waxay kuu sheegi doontaa haddii dhulku aanu ahayn mid firfircoon, oo kuu oggolaanaya inaad aqbasho ama diiddo isbeddelka.
Waxaan u maleynayaa in marka bilaabay version deggan diyaar u noqon doono buuga, oo waxba kuma yeeli sababay luqada Isbaanish, maxaa yeelay, waan dareemi in qalab this inkastoo dhashay Greece, waxaad heli kartaa soo dhaweynta wanaagsan ee deegaankeena Hispanic, fiirsaneysa in Google Earth yimid si ay u xalliyaan la'aanta ah ee xogta ee dhulal badan.
Ma aqaano qiimaha wali, mana u maleynayo inay u bixi doonaan shati siinta hore ee ku saleysan macaamil ganacsi, taas oo u muuqata inaysan waxtar badan u lahayn jawiyada qaarkood. Waxaan rajeynayaa inay aadaan ruqsad rasmi ah, arintaan waxaan weydiinayaa:
Intee in le'eg ayey arjiga sidan oo kale ah u qalantaa?
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa ku saabsan wararka ka imaanaya PlexEarth 2.5
3D Dwg Google Earth KML PlexEarth
Post Previous" Hore Khariidadaha Google oo ka socda mashiinka Mobile 6
Post Next G! qalabka, fududeynta isticmaalka Bentley MapNext »
Hal Jawaab oo ah "Muxuu keenaa PlexEarth 2.0?"
Dolarin isagu wuxuu leeyahay:
25,43 $ + Kharashka dhoofka